Isitudiyo esikumgangatho ophantsi - I-Airbnb
Isitudiyo esikumgangatho ophantsi
Indawo epholileyo eqaqambileyo esezantsi kwe studio. Ukuphumla okumangalisayo kuyo yonke into..
I-apt yakho epholileyo kwi-1.4acres yegadi yenzelwe kwaye yahonjiswa nguGael. Ine-eclectic emangalisayo kunye ne-ambience epholileyo ekhethekileyo kule B&B. I-apt sisicwangciso esivulekileyo, esikhanyayo kwaye sinomoya kunye nebhedi enye ekhululekile kakhulu. Ikhitshi lilungiselelwe ukuzenzela ukutya kunye nefriji/ifriji, isitovu, ioveni, imicrowave kunye nomatshini wekofu.
Ndinayo nenye indawo ekumgangatho ophezulu yabantu ababini ukuya kwabayi-3
4.75 · Izimvo eziyi-92
I-Mt Temple yilali entle encinci egcinwe kakuhle enebhari, indawo yokutyela, ivenkile, icawa, ibala legalufa elinemingxuma eli-18 kunye noluhlu lokuqhuba. (Sinezinti zegalufa, kuzo zonke iisayizi ukuba ziyafuneka) Ikhaya lethu lihamba i-10min ukuya kuzo zonke ezi. Indawo yokutyela enomtsalane yeMotte & Bailey ivulwa ngoLwesine-ngeCawa kunye nokuhamba ngemizuzu emi-5.
Umzila kaloliwe omdala ..Mulingar ukuya e-Athlone Greenway
Lo ngumjikelo 'kufuneka' kuye nabani na othanda ukuphuma ngebhayisekile yakhe. Qala kwenye yeendawo ezininzi zokungena (eyona ikufutshane yi-3km) kwaye kwi-40km elandelayo ukwibhayisekile ezulwini.
Le yindlela yomjikelo ozinikeleyo olandela umzila kaloliwe omdala phantsi kweebhulorho ezivuthululweyo, utyhutyha itonela kunye neendawo ezisemaphandleni ezintle ezidlulileyo ukuya kutsho e-Athlone. Ngamanqaku amaninzi okungena kunye nokuphuma, ungatsibela kwaye uye kuphonononga iilali kunye nezinto ezinomtsalane endleleni.
I-Athlone yidolophu entle eselunxwemeni loMlambo iShannon. Kukho imyuziyam esebenzisanayo ekufanele ngokuqinisekileyo ukutyelelwa, njengeGalari yobugcisa yasimahla. Igalari yaseLuan yavulwa kwi-2013 ejongene nomlambo kwaye ibonisa ubugcisa obukhulu base-Irish kunye neendawo.
Indawo yebhanki enomtsalane ekhohlo ineendawo zokutyela ezintle (ezininzi esinokuzicebisa) kunye nee-pubs ezinomculo omninzi wesintu waseIreland kunye neyona ndawo indala yaseIreland, iSeans.
Indlu yethu ilungile ecaleni kwe-apt, ke sikufutshane kuzo zonke iimfuno zakho okanye naluphi na ulwazi onokuthi ulufune. Ukuba ufuna ....iswekile okanye isosi yesoya.....nokuba yintoni na, siya kuzama ukukunceda.
Ndikwafundisa neklasi yokubhaka izonka zesiNtu e-Ireland enokubhukishwa ngo-Airbnb
Ukuba ungathanda ukuzibandakanya nathi kwisidlo sakusasa (€12.50pp) okanye isidlo sangokuhlwa (€15pp) sisazise kwaye siza kumisela iindawo ezongezelelweyo zayo nayiphi na into esembizeni.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Moate